Al-shabaab Oo Duhur-cad Madaafiic Ku Qaraacday Madaxtooyada Soomaaliya | Himilo Media Group
Al-shabaab Oo Duhur-cad Madaafiic Ku Qaraacday Madaxtooyada Soomaaliya
Muqdisho, 2 Maarij, 2019 (Himilo) – Ilaa shan madfac oo loo adeegsaday qoriga hoobiyaha ayaa qaar ka mid ah la sheegay in ay ku dhaceen gudaha xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho Maalinnimadii Maanta, halkaasi oo ay deggan yihiin Madaxda ugu sareysa dalkaasi.
Wararku waxaa ay sheegayaa in saddex madfac ay ku dhaceen qeybo ka mid ah Madaxtooyada, halka kuwa kalena ay ku dhaceen xaafaddaha ku hareereysa Madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Somalia.
Lama oga khasaaraha ka dhashay Madaafiicdan, balse Warbaahinta Internet-ka laga akhristo ee Muqdisho ayaa sheegay in Madaafiicdani ay khalkhal ku abuureen qeybo kamid ah xarunta Madaxtooytada, khalkhalkaasina wuxuu sababay in Dad badan dibedda uga carraraan, wallow aan la sheegin Dadka Madaxtooyada ka baxay ay ku jiraan Madaxda ugu sarraysa Dawladda Soomaaliya oo badankoodu halkaa deggan.
Dhanka kale, mid ka mid ah Madaafiicdan ayaa la sheegay inuu ku dhacay dhismaha xarunta Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshahada Soomaaliya oo ku taala dhabarka danbe ee Tiyaatarka Muqdisho.
Wasiirka Wasaarradda Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) oo ka hadlay Madaafiicdan, ayaa sheegay inuu jiro khasaare burbur oo soo gaadhay mid ka mid ah xafiisyada Wasaaradda oo ku dhacay madfac hoobiye, isagoo xusay in aanu jirin khasaare nafeed.
“Madaafiicdan dib uma celin karaan rejada aynu ka qabno in aynu helno Nabad iyo Nolol fiican, waxay doonayaan in ay rejo beel inaga dhigaan oo hakiyaan horumarka, Ganacsiga, Maalgashiga iyo yididiilada jirta, ka yeeli mayno waana la ciqaabi doonaa argagixisada insha allah”ayuu yidhi Wasiir Maareeye.
Kooxda Al-shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka madaafiicda ee ku qaaday Xarunta Madaxtooyada Villa Somalia, waana weerarkii labaad oo Al-Shabaab ka fuliso Muqdisho laba Maalmood gudahood, kaddib weeraro ku bilowday qaraxyo oo habeenkii khamiistii ay ku qaadday Al-shabaab Huteelka Makka Al-mukarrama.